२०१९को पहिलो महिना यी ४ राशीको लागि अशुभ ! जनवरी महिना भरि सावधान रहनुपर्ने ! – MediaNP
आइतबार, १०, चैत, २०७५
२०१९को पहिलो महिना यी ४ राशीको लागि अशुभ ! जनवरी महिना भरि सावधान रहनुपर्ने !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००७:४३0
काठमाडौँ,२४ पुस । नयाँ वर्ष अर्थात सन् २०१९ सुरु भइसकेको छ । नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै विभिन्न ग्रहशरुले आफ्नो स्थान परिवर्तन गरेको छन् । जसको प्रभावले केही राशीलाई शुभ रहेको छ भने केही राशीलाई अशुभ रहेको पाइएको छ । त्यसैले आज हामी जनवरी महिना भरि सावधानी रहनको लागि ज्योतिष शास्त्रले छुट्योका राशीको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ ।
वृष राशि : वृष राशी हुने ब्यक्तिहरुलाई यो महिना भरि आर्थिक रुपले आसै प्रगति नहुने देखिएको छ । यो महिना भरि धन आर्जन कम हुने भएकाले खर्च अनियन्त्रित हुने देखिएको छ । निर्धारित समयमा काम पुरा गर्न नसक्दा परिवारबाट आलोचनाको सिकार बन्नुपर्ला । यो महिनामा नयाँ कामको थलानी नगर्दा नै राम्रो होला । यात्राको लागि भने खासै राम्रो छैन् ।
सिंह राशि : उक्त राशीको लागि जनवरी महिना त्यति राम्रो छैन् । स्वास्थ्यमा समस्या देखिने छ भने स्वास्थ्यको कारण परिवारमा तनाव बढ्नेछ । धेरै समय पूरा भएको समस्या फेरि बल्झिने भएकाले अगाडी नै सावधानी अपनाउँदा राम्रो हुनेछ । स्वास्थ्य समस्याको कारण तनाव बढ्ला । व्यापार ब्यवसायमा कानुनी समस्या आउने भएकाले सजग रहनु पर्नेछ । जनवरी महिनाभरि आफ्नो गोपनियताको ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।
मकर राशि : यो राशीको लागि जनवरी महिनामा यात्रा गर्दा संयम अपनाउनुर्पेछ । सकेसम्म लामो यात्राको योजना तय नगर्दा नै राम्रो हुनेछ । यो महिनामा प्रेम सम्बन्धको कारण तनाव उत्पन्न हुनेछ । पारिवारिक वातावरण राम्रो नहुँदा दैनिकीमा समस्या आउनेछ । यो राशी भएका ब्यक्तिको लागि नयाँ कामको लागि लगानी गर्नु पनि राम्रो छैन् ।
धनु राशि : यस राशी भएका ब्यक्तिहरुको लागि जनवरी महिनामा आफ्नै भनिएकाहरुबाट पनि असहयोग हुने देखिएको छ । आफ्नो कामको लागि अरु बाट कुनै पनि सहयोगको अपेक्षा नगर्दा नै राम्रो हुनेछ । आफुमा बढ क्रोधित भाव उत्पन्न हुने भएकाले सामाजिक कार्यमा नराम्रो छाप बस्नेछ । यो महिनामा धनु राशी हुनेहरुको लागि आफ्नै ब्यवहारले पछुतो मान्नु पर्ला । सरकारी पक्षबाट आफ्नो ब्यवसायमा हस्तक्षेप हुनेछ ।
नेपाल आइडलकी थर्ड रनरअप अस्मिता अधिकारीको नाचले जापान टोकियोमा मच्चायो तहल्का (भिडियोसहित )
दुई घण्टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावित
दम रोग के हो ? दमका कारण, लक्षण र उपचार कसरी गर्ने ?
किन आउँछ ? बारम्बार मुखबाट थुक, यस्ता छन् कारण ! (उपचार विधीसहित) एकचोटी पढ्नै पर्ने !
किन सेवन गर्ने पाकेको रातो गोलभेंडा, यस्ता छन् महत्वपूर्ण फाइदाहरु ! पढ्न नछुटाउँनुस !